အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း (၆) ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Facebook ဆိုင်ရာ , အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ » အွန်လိုင်းငွေရှာနည်း (၆)
Friday, October 25, 2013 Facebook ဆိုင်ရာ, အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများ
အွန်လိုင်းမှာ ငွေရှာချင်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဘယ်လိုရှာရတယ် ဘာတွေလိုအပ်တယ် ဆိုတာ
ငွေမရှာခင် စာကိုသေချာဖတ်ပါ ငွေရှာတဲ့ဆိုဒ်တွေကတော့ အားကြီးပဲဗျာ ရှာလို့ကရတယ် ငွေထုတ်တဲ့
နေရာမှာအခက်ခဲ့ဖြစ်စေတာများတယ် ဒါပေမယ့် အာမခံပေးထားတဲ့ဆိုဒ်လေးကို http://makingmoneytutorial.weebly.com/ကလစ်လိုက်ပြီး သွားရောက်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
ငွေရှာနည်းလမ်းများ ကျော်ခွပြီးအကောင့်လုပ်နည်းများ ငွေရှာသူများ သွားရောက်လေ့လာသင့်တဲ့
စည်းကမ်းချက် များကိုအရင် သေသေချာချာလေးဖတ်ပေးပါ ( နည်းပညာသမားတစ်ဦးမပီသစွာဖြင့် မိမိကိုယ်တိုင်အသုံးမကျ ဇွဲမရှိဘဲ အများသူငါရှေ့တွင် PTC ၀င်ငွေရှာ Website များတွင်လုပ်ကိုင်နေသူများ မိတ်ဆက်သူများကိုကိုစော်ကားသူတစ်ယောက်ကြောင့် ယခုလိုစည်းမျဉ်းများထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်သည် )
ယခု USAClix ၀င်ငွေရှာ Website သည့်အတုအယောင်မဟုတ် လုံးဝ ( လုံးဝ )အစစ်အမှန်သာဖြစ်သည်။ 0င်ငွေရှာသည့်ဆိုဒ်များကို စစ်ဆေးသော
နာမည်ကြီး စစ်ဆေးရေးဆိုဒ်ရဲ့ ထောက်ခံမှု ကို 75% အပြည့်မှန်ကန်ကြောင်း(Safe) ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့ ၀င်ငွေရှာ Website လည်းဖြစ်ပါတယ်
http://www.scamadviser.com/is-usaclix.com-a-fake-site.html မှာကြည့်နိုင်ပါတယ်( စမ်းသပ်ပြီး )
မိမိရဲ့အင်တာနက်လိုင်းမြန်နှုန်းသည် Download Speed အနည်းဆုံး 30 KB ရှိမှ ၀င်ငွေရှာ သည့် Website များတွင် အလုပ်လုပ်ပါ
အင်တာနက်မှာ ၀င်ငွေရှာမည့်သူများကို PTC ငွေရှာသည့် Website များကိုအသုံးပြုရာတွင် မိမိကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် နဲ့ မိမိကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာဖြင့်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် .. အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် ပြုလုပ်ခြင်း လုံးဝ ( လုံးဝ ) ရှောင်ပါ အကောင့်အား အဘန်းခံရနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ မိမိက ဖုန်းရှိတယ်ဆိုရင် ဒီဖုန်း အင်တာနက်နဲ့ မိမိကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ
ကို ( Join )ဆက်ပြီး အသုံးပြုပါ..အကယ်လို့ မိမိကွန်ပျူတာက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးသွားလျှင် အခြား မည့်သည့် ကြော်ငြာမျှ မဖွင့်ကြည့် ( or ) Click မလုပ်ရသေး
သော ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်လုံးတွင် နဂိုမူလ ဖုန်းအင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဓိကကတော့ အင်တာနက်လိုင်းတစ်လိုင်းတည်းကိုဘဲ စွဲမြဲစွာသုံးနိုင်လေ ကောင်း
အခုကျွန်တော်ဒီဆိုဒ်တွင် တင်ပြထားသော ငွေရှာဆိုဒ်များကိုယုံကြည်မှ အလုပ်လုပ်ပါ.......
မည်သည့်ဝင်ငွေရှာ Website မဆို အုံဖွချက်ချင်းငွေမရပါ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်သမားများအတွက်ဘားမှမဖြစ်သော်လည်း ဖုန်းသမားများအတွက် တစ်လကျော် နှစ်လအတွင်း အနည်းငယ်အရှုံးရှိမည် သို့သော် ငါး လအတွင်း ညွှန်ပြထားသည့်အညွှန်းများအတိုင်းပုံမှန်လုပ်သွားရုံဖြင့် မည်မျှဝင်ငွေများရရှိလာသည် အမြတ်ပြန်ရလာ သည်ကို လက်တွေ့သိရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ GSM 420 ကို ( WCDMA Only ) ပြောင်းပြီး ငွေရှာဆိုဒ် လေးငါးခုမှာလုပ်နေပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာကို အနည်းငယ်မျှဘာသာပြန်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ဇွဲရှိသူဖြစ်ရမည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ စိတ်ရှည်သူဖြစ်ရမည်။ ဒီလိုအရည်အချင်းတွေရှိသည်ဆိုလျှင် ၀င်ငွေရှာသည့် Website များတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဇွဲမရှိ မစဉ်းစားမတွေးခေါ် မလေ့လာလျှင် လုံးဝအမြတ်မရှိနိုင်ပါ။ အဓိက ဇွဲသာအရေးကြီးသည်
အရေးကြီးဆုံးသောအချက်အဖြစ် မိမိမှာ Direct Referral အနည်းဆုံး အယောက် 50 လောက်ကို ငါးလအတွင်း ရှာနိုင်ရမည်။ Direct Referral ကိုနားမလည်သူများအနေဖြင့်
သင်ခန်းစာပါအကြောင်းအရာများကိုဖတ်သွားရုံဖြင့် သဘောပေါက်မည်ဖြစ်သည်။ ( ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် DR များကို Facebook မှသူငယ်ချင်းများကိုပြောပြပေးခြင်း ၊ မိမိကိုယ်ပိုင်
Free Website ပြုလုပ်ကာ D R ၀င်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း ၊ Facebook Comment များတွင် မိမိပြုလုပ်ထားသည့် ၀င်ငွေရှာ Website များအကြောင်း ကို Comment
ပေးပြီး ကြော်ငြာခြင်းဖြင့် D R များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။ ယခုဆိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသောအကြောင်းအရာများကို မိမိကိုယ်ပိုင်အဖြစ် လွတ်လပ်စွာ ကူးယူသုံးစွဲခွင့်ပြုသည်.. ကျန်တာကတော့ မိမိရဲ့ ဦးနှောက်ကို သုံးရမည်ဖြစ်သည် )
ဖုန်းကိုအသုံးပြုပြီးကြော်ငြာကလစ်ခြင်း လုံးဝ(လုံးဝ)ခွင့်မပြုပါ..၀င်ငွေရှာသည့်ဝဘ်ဆိုဒ်များကိုတိုင်က သူတိုရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမှာတင်းကျပ်စွာတားဖြစ်ထားသည်။ ၀င်ငွေရှာ Website များရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုသိလိုပါက ၄င်းဝဘ်ဆိုဒ်များရဲ့ Team Of Services ဆိုတဲ့နေရာတွင် အသေးစိတ်ဖတ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့လည်း အဲကဖတ်ထားသမျ
ငွေများလို့ငွေထုတ်ချင်လျင်ဖြစ်စေ...အကူအညီလိုအပ်လျင်ဖြစ်စေ adflycreator@gmail.com သို့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်သည်။
ယခု Website များတွင်ဝင်ငွေရှာဝဘ်ဆိုဒ်များကို ပရိုမိုးရှင်းပေးထားသည် ။ ၄င်းတို့သည် ၀င်ငွေရှာ ၀ဘ်ဆိုဒ်များမှ ပြန်လည်ရရှိသောငွေများကို ပရိုမိုးရှင်းပြန်ပေးခြင်းသာဖြစ်သည်။
အထက်ပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုလိုက်နာနိုင်သည်ဆိုလျှင်အောက်ဖော်ပြပါ USAClix ၀ဘ်ဆိုဒ်တွင် ငွေစတင်ရှာနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါသည်။
USAClix ဆိုတာမှန်ကန်ပြီး 75% ထောက်ခံမှုရရှိထားတဲ့ဝင်ငွေရှာ Website ဖြစ်ပါတယ်..ဒီ Website မှာကြော်ငြာကြည့်ပြီး ၀င်ငွေရှာမယ်ဆိုရင်အချိန်အားဖြင့်အောင်မြင်ဖို့ တစ်နှစ်နီးပါးကြာမှာဖြစ်ပါတယ်..ဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုရင် အချိန်တိုအတွင်းအောင်မြင်အောင် သုံးလေးလအတွင်းအောင်မြင်အောင် အဆင်ပြေအောင် ၀င်ငွေရှာဖွေသည့်နည်းလမ်း
များကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..ဒီအင်တာနက်မှာငွေရှာတဲ့အလုပ်သည် Job or Work လို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားရပါ့မယ်..အပြင်းပြေမဟုတ်ပါ... ကဲ စည်းကမ်းချက်တွေလဲလိုက်နာနိုင်မယ်..အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ အရင်ဆုံး Register လုပ်လိုက်ရအောင် .. Register လုပ်သူက မြန်မာနိုင်ငံကဆိုရင် တစ်ခုသတိပေးပါ့မယ် မြန်မာနိုင်ငံကနေ Register လုပ်မယ်ဆိုရင် တစ်ခါတစ်ရံမှာ " Sorry , This IP Address is use by other member " ဆိုပြီးပေါ်တတ်ပါတယ်..ဒါဆိုရင်တော့ ကျော်ခွပြီးတော့ Register လုပ်မှရပါတော့မယ်..ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကို ဒီမှာ ဖတ်လိုက်ပါ အဲသည်နည်းအတိုင်းသာလုပ်ပါ
ရကိုရပါတယ် ။ ပြည်ပကနေ လုပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အဆင်ပြေတယ် ဘားမှကျော်ခွစရာမလိုပါဘူး။ အိုကေ .. Register လုပ်ဖို့အတွက် ဒီကိုအရင်နှိပ်လိုက်ပါ ။
ပြီးတာနဲ့အောက်ပုံမယ်ပြထားတဲ့အတိုင်း Register ကိုနှိပ်ပါ..
ပြီးတာနဲ့ အောက်ပုံမယ်ပြထားတဲ့အတိုင်း ဖြည့်စရာရှိတာဖြည့်လိုက်ပါ.. ( PayPal နဲ့ PayZa Account မရှိသေးရင်တော့ မိမိလိပ်စာကိုဘဲပြန်ထည့်လိုက်ပါ.. Account ၀ယ်ချင်ရင်တော့ 09 420 700 582 သို့ဖြစ်စေ goldenmyanmar44@gmail.com သို့ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်။
Register လုပ်ပီးရင် Login ၀င်လိုက်ပါ.. Login ၀င်လိုက်တဲ့အခါ အပြာရောင်အတန်းလေး တက်သွားပါလိမ့်မယ်..စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ..
Login ၀င်ပြီးပြီဆိုတော့ အဓိက ပိုက်စိရှာတဲ့အကြောင်းကိုဘဲ အရင်ပြောလိုက်ရအောင်... အခု USAClix မှာက ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်ပြီးရင်တောင် ပိုက်ဆံက သိပ်ရမှာမဟုတ်
ပါဘူး..ဒီတော့ အချိန်နည်းနည်း နဲ့ များများမြန်မြန်ရအောင် အကောင်းဆုံးရှင်းပြပေးသွားပါ့မယ်..ကျန်တာကတော့ မိမိရဲ့ Brain ညှစ်အားလေးသုံးရပါမယ်..ပြောခဲ့ပါတယ်နော်
အခုလို ငွေရှာတဲ့ဆိုဒ်တွေဟာ အပြင်းပြေမဟုတ်ဘဲ Job or Work တစ်ခုပါဘဲလို့..အိုကေ ..အောက်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Earn Cash >> View Advertisements အဆင့်
ဆင့် နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင် ကြော်ငြာ နှိပ်ရမယ့်နေရာကိုရောက်သွားပါပြီ... .အိုကေ ရောက်သွားပြီဆိုရင် ကြော်ငြာ Box 15 ခုလောက်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် ကြော်ငြာတွေကို တစ်ခုချင်းစီ
ကလစ်ပါမယ်..မြန်မြန်ပီးအောင်လို့ များများကလစ်လိုက်မယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ တစ်ခုချင်းစီဘဲ ကလစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်... မြှားအစိမ်းပြထားတဲ့အတိုင်း အပြာရောင် Bar လေးပေါ်ကိုထောက်ပြီး ကြော်ငြာတစ်ခုကို စတင်ကလစ်လိုက်ပါ့မယ်... အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ ( မှတ်ချက် - ကြော်ငြာတစ်ခုကို4ကျပ် ကျော်ကျော်အထိပေးပါတယ် )
ဒါဆိုရင် ကြည့်ရမယ့် ကြော်ငြာစာမျက်နှာထွက်လာပါလိမ့်မယ်... အလွယ်ပြောရရင် Website တစ်ခုပေါ့..ပြီးရင် Website တစ်ခုလုံးကိုပြလိမ့်မယ်.. အစိမ်းရောင်ဘားတန်းလေး
တက်မယ်...ပြီးရင် ပုံခြောက်ပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..ပေါ်လာတဲ့ပုံခြောက်ပုံထဲက ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံကို ကလစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. .( တစ်ခုသတိပေးတာက ကလစ်လိုက်တာနဲ့ တန်းပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး..သူသတ်မှတ်ထားတဲ့ Webpag ရဲ့စာမျက်နှာအပြည့်ပေါ်မှ Click ရမယ့် ပုံတွေပေါ်တာပါ..ကျွန်တော်ကတော့ GSM Connection နဲ့သုံးတယ်...တစ်မိနစ်လောက်နေလို့မှClick ရမယ့်ပုံတွေမပေါ်သေးရင် Loading ပြန်ဆွဲတယ်.မကြာဘူးတန်းပေါ်လာပါတယ်...) အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ အစိမ်းတန်းလေးတက်နေတဲ့ပုံပါ...
ပြီးတာနဲ့ Click The Upside Down picture ဆိုပြီး ပုံခြောက်ပုံပေါ်လာပါ့မယ်..သူပြောထားတဲ့အတိုင်း ဇောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့ပုံကို ရွေးချယ်ကလစ်ပေးလိုက်ပါ...ဒါဆိုရင်အမှန်ခြစ်လေးပေါ်လာပြီး ကြော်ငြာတစ်ခုကလစ်ခြင်းပီးသလို..အဲဒီ
ကြော်ငြာအတွက် ပိုက်စိလဲရပြီဖြစ်ပါတယ်..ကဲ အောက်ကပုံကတော့ ပုံခြောက်ပုံထဲက ဇောက်ထိုးရွေးချယ်ပြီးကလစ်ရတာကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်...ကဲ ဟုတ်ပီ..ကျန်တဲ့ကြော်ငြာ
တွေကိုလဲ အဲအတိုင်းသာ ကလစ်သွားပါ.. Loading လုပ်တာနည်းနည်းကြာနေရင် Loading ပြန်လုပ်လိုက်ပါ... အကြံပေးလိုတာကတော့ ညပိုင်း 11 နာရီနဲ့ မနက်ခင်း 11 နာရီအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကနေ ကြော်ငြာကလစ်တာအကောင်းဆုံးပါ ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ လိုင်းအရမ်းနှေးတယ် မကောင်းဘူး..ကျနော်လဲ အဲအချိန်မှလုပ်တာပါဘဲ။
ဟုတ်ပီ..ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်ပြီးသွားရင်ကြော်ငြာတွေက မှိန်သွားလိမ့်မယ်..ဒါပေမယ့် ပြသနာမရှိဘူး 24 နာရီပြည့်ရင် ကြော်ငြာအသစ်တွေပြန်ပေါ်ပါတယ်..ကလစ်ရုံပါဘဲ.. ကြော်
ငြာတွေကလစ်ပြီးပြီဆိုတော့ နောက်တစ်ခု ကံစမ်းမဲနှိုက်မယ်... ကံစမ်းမဲကို 25 ကြိမ် တိတိ ကံစမ်းခွင့်ရှိတယ်..ကံစမ်းမဲတစ်ခါပေါက်ရင် 5$ ဒါမှမဟုတ် 0.010$ အထိ မဲပေါက်တယ်
25 ကြိမ်မပြည့်မချင်း မဲပေါက်နိုင်ပါတယ်.. အိုကေ ဘယ်လို မဲနှိုက်မလဲ ထိပ်ဆုံး Menu မှာရှိတဲ့
Earn Cash >>USAGrid ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..
ပုံမှာဆိုရင် အကွက်စိပ်လေးတွေတွေ့မှာပါ...အဲဒီအကွက်စိပ်လေးတွေက ကံစမ်းမဲပါဘဲ..အကွက်စိပ်လေးတွေထဲက ကြိုက်တဲ့တစ်ကွက်ကို နှိပ်လိုက်တာပါနဲ့ ထိပ်ဆုံးက ကြော်ငြာကြည့်သလို Website ( New Tap ) တစ်ခုပေါ်လာပါ့မယ်..ပြသလိုတဲ့ Website ကိုပြပါလိမ့်မယ်..ပြီးတာနဲ့ အစိမ်းတန်းလေး တက်လာပါလိမ့်မယ်..အဲဒီအဆင့်မှာ အစိမ်းတန်းလေးတက်ပြီးလို့ မဲပေါက်တယ်ဆိုရင် မဲပေါက်ကြောင်း ဘယ်လောက်ပေါက်ကြောင်းပြပါလိမ့်မယ်.. မပေါက်ဘူးဆိုရင်တော့
Your click has been validated but you were notawinner this time ဆိုပြီး မဲနှိုက်ရန်ကျန်ရှိတဲ့အရေအတွက်ကို ပြပါလိမ့်မယ်... ကဲ မဲက 25 ခါတောင်နှိုက်ရတာ
ဆိုတော့ ငါးဒေါ်လာပေါက်မလား..0.010$ ပေါက်မလား တစ်ခုခုကတော့ပေါက်မှာပါ :) ကျနော် မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ The-bux ဆိုတာရှိပါတယ်..အဲမယ်လုပ်နေတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေ
တော်တော်များများ မဲချည်းနှိုက်နေတာ ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ ပေါက်တာကိုး.... အိုကေ..မဲနှိုက်တဲ့နေရာကိုနားလည်ပြီထင်ပါတယ်နော့်... မဲနှိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် ပိုက်ဆံထပ်ရမယ့် အလုပ်တစ်ခုကိုသွားပါ့မယ်... အခု လုပ်မယ့်အလုပ်ကမှတစ်ကယ့်အလုပ်အစစ်ပါ .. သေချာဖို့လိုပါ့မယ်.. လုပ်ငန်းတစ်ခုကို 250 ကျပ် ကျော်ကျော်အထိပေးပါတယ်။
ဘယ်လို အလုပ်မျိုးလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်... သေချာကြည့်နော်... ဒီအလုပ်ကို PTSU ( Paid to sign up ) လုပ်ငန်း လို့ခေါ်တယ်..သဘောတရားကတော့ သူတို့ပြထားတဲ့
အထဲမယ် မာန်ဘာဝင်..ပြီးရင်သူတို့ခိုင်းတာကို လုပ်..လုပ်ပြီးရင် ပိုက်ဆံပေးမယ် ဒါပါဘဲ... ငွေရှာတဲ့ ၀ဘ်ဆိုဒ်တွေမယ် PTSU Offer ဆိုတာ ပါကိုပါတယ်... ဒီလုပ်ငန်းပါလို့ သူများနိုင်ငံမှာ ၀င်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေ ၀ုန်းဒိုင်းဂွမ်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်ကုန်တာပါ.. ကဲ အောက်ပုံမယ်ပြထားတဲ့အတိုင်း နှိပ်လိုက်ပါ...
အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ ..
အပေါ်ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါဘဲ လုပ်ငန်းခြောက်ခု ရှိတယ်... ထိပ်ဆုံးက လုပ်ငန်းဆိုရင် Naidbux ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် $0.25 ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းထားပါ
တယ်.. ကဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မလဲ အဲဒီ NaidBux ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ.. အောက်ကပုံကိုဆက်ကြည်ပါ..
အပေါ်ပုံမယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းဘဲ Instructions မှာရေးထားတာကတော့ သူပေးတဲ့ Link မှာမန်ဘာဝင်ပြီး အဲဒီ ဆိုဒ်ကကြော်ငြာတွေကို 14 ရက်တိတိ ကလစ်ပေးပါတဲ့.... ဟုတ်ပြီ
ထိပ်ဆုံးက သူပေးထားတဲ့ Link ကို နှိပ်လိုက်..ပြီးရင် Regsiter လုပ်ပြီး သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း 14 ရက်တိတိ ကြော်ငြာတွေကို နှိပ်ပေတော့ ( Naidbux သုံးနည်းမသိပါက ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ် ) တစ်ကယ်လို့ မိမိက Naidbux မှာမန်ဘာဝင်ပီးသားဖြစ်ပါက ဆက်မလုပ်ပါနဲ့ ဒီအလုပ်ကိုကျော်သွားပြီးအခြားအလုပ်ကိုသာလုပ်ပါ.. အိုကေ ပြန်ဆက်မယ်
မိမိက အကောင့်မလုပ်ရသေးဘူး အခုမှအသစ်ဆိုရင် သူပြထားတဲ့လင့်မှာ မန်ဘာဝင်လိုက်ပါ.. ပြီးတာနဲ့ Username or Email used in signup process အကွက်မှာ မိမိက ဘယ်နာမည်နဲ့ မာန်ဘာဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.. ဥပမာ aungsan နာမည်နဲက မန်ဘာဝင်တယ်ဆိုရင် aungsan လို့ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ.. အောက်က Welcome email
or any extra information မှာကျတော့ မိမိက မာန်ဘာဝင်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရယ် .. ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကို ရက်အပြည့်လုပ်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း နဲ့ ရက်ပြည့်ပါက ပိုက်ဆံပေးပြီးပြီဆိုတာကို ပြန်ဆက်သွယ်ရမယ့် Email လိပ်စာလေးပေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ကို နည်းနည်း ဘိုလိုမှုတ်ပြီးရေးလိုက်ပါ.. ပြီးတာနဲ့ Send နှိပ်လိုက်ပါ... ပြီးတာနဲ့
ပုံမယ် မြှားနီပြထားတဲ့ PTSU History ကိုနှိပ်လိုက်ပါ..ဒါဆိုရင် မိမိ လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ History ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်..စောစောက Naidbux မယ်အလုပ်လုပ်ဖို့
လုပ်ခဲ့တယ်နော်. မြှားအစိမ်းပြထားတဲ့နေရာမယ် Pending ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ... ကိုယ်က 14 ရက်ပြည့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ Pending နေရာမယ် Complete
ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပြီး 0.25$ ကလည်း မိမိဆီကိုေ၇ာက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်.. ဒီလုပ်ငန်းဟာဆိုရင် များများလုပ်နိုင်လေ များများပိုက်ဆံရလေပါဘဲ..အင်္ဂလိပ်စာအနည်းငယ်တတ်ကျွမ်းဖို့ စိတ်ရှည်ဖို့ ခေါင်းသုံးဖို့လိုက်ပါတယ်..ဒါကမှ တစ်ကယ့် အွန်လိုင်းအလုပ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ်... အိုကေ စိတ်ဝင်စားရင် အားတယ်ဆိုရင်တော့ စိတ်ရှည်လက်ရှည်သာ လုပ်နိုင်သလောက်
လုပ်ကြပါလို့ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်မျာ............... ကဲ ရသမျှအပေါက်တွေကနေ ပိုက်ဆံရှာနည်းရေးပြပေးတာကတော့ ကုန်ပြီ ဒီထက်အဆင့်မြင့်ပြီး သက်တောင့်သက်သာပိုက်ဆံ
ပြန်ရမယ့် နည်းလမ်း ထပ်ရေးပြပါမယ်... အပေါ်သုံးနည်းက ရှာလို့ရလာသည့် ပိုက်ဆံများသည် My Account ထဲက Balance မှာအကုန်ဝင်ပါတယ်... အဲဒီ Balance ကိုအခြေတည်ပြီးတော့ Share ၀ယ်ခြင်း ၊ Direct Referral ၊ Rented Referral ၀ယ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်သလို မိမိရဲ့တစ်နေရတာ ၀င်ငွေမြင့်မားအောင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် ညွှန်ပြထားတဲ့နည်းတွေအတိုင်း စနစ်တစ်ကျလဲသုံးသလို မိမိရဲ့ ဦးနှောက်ကိုလည်းသုံးပေးပါ..ဒါဟာ အပျော်တမ်းမဟုတ်ဘဲ Online Job တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်.လွယ်
လွယ်နဲ့တော့ ဘားမှမရပါ..အခု ကျွန်တော် ဆက်ရေးဖို့ကျန်ရှိတဲ့အပိုင်းကတော့ Direct and Rented Share ၀ယ်ခြင်း.. Share များကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ငွေထုတ်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ် ဒီအဆင့်များကိုတော့ http://makingmoneytutorial.weebly.com/outbux-412141574140414541004156412341574140412341164153.html မှာဖတ်နိုင်ပြီး သဘောတရားခြင်း သုံးပုံသုံးနည်း အတူတူပင်ဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ..အေးအေးဆေးဆေး သေသေချာချာဖတ်သွားပါ လိုက်လဲလုပ်ကြည့်ပါတစ်ပတ်အတွင်း သဘောပေါက်နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. ယခု USA Clix မှာငွေရှာခြင်းအတွက် ပရိုမိုးရှင်းကတော့ 5$ ပြည့်တိုင်း 1$ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာငွေ 1000 ကျပ်ထုတ်ယူနိုင်တဲ့ ပရိုမိုးရှင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်.. ဆုငွေထုတ်ယူလိုပါက 09 420 700 582 သို့ဆက်သွယ်ထုတ်ယူနိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးဘဲ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Open With အသုံးပြုလို့ ရအောင် လုပ်နည်း
Windows တွေမှာ Right Click အသုံးပြုလို့မရအောင်၊ မေ...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအဖို့ ဓမ္မပဒ ဟာ
Firefox version အသစ်လေး
TrapCall – Unmask Blocked Calls
SMS Lock Plus
obiletag QR & product Scanner
FVD - Free Video Downloader 4.0.2 APK
Shan Myanmar Game for Andriod
ဖြူးသားလေးရဲ့ ပရိတ်၊ပဌာန်းပါဠိတော် APK ဖိုင်များ
SONY FIRMWARE တွေ စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Windows 8 All in One Final Permanent Activator (Ok...
အင်တာနက်လျှောက်နည်းနှင့် ဖုန်း Rain Tune ထဲ့နည်းပေ...
Boot Animations v1.5
CyberLink Power Director 11 Ultimate Suite
ဒီ APP ကတော့ ဖုန်းငွေဖြည့်တာတွေ Internet လျှောက်တာ...
Window 8/8.1 သုံးနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက် StartW8ေ...
Sony Ericsson Bootloader Unlocker Tool လေးပါ
MM Font Installer v1.0 For Android
ကွန်တော်သိသမျှလေး ပြေားပြတာနော် ဖတ်ပေးပါအုန်း
မန်းဘားမဝင်အားပေးချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် မလုပ်တတ်ဘူးဆို...
Huawei G510 LCD မီးမလင်းပြသာနာဖြေရှင်းနည်း
Android All Diver(Diver ရှာမတွေသူများအတွက်)
Screen ခနခနလင်းနေတဲ့ဖုန်း မလင်းအောင်လုပ်မယ်
Android version 1.6 မှ 4.2 ထိ Root လုပ်နိုင်မယ် Ro...
လာပြန်ပါပြီဗျာ ဆရာကြီး V-ROOT ဘားရှင်း 1.7.1 လေးဗျ...
ANDROID ဖုန်းတွေပေါ်မှာရေဒီယို နားထောင်လို့ ရမယ့် A...
လိုချင်သော Video ကိုဖြတ်တောက်နည်း
အပျော်တန်း ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်ချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အ...
Internet Download Manager Speed ဂိတ်ဆုံးထိမြှင့်မယ...
ကွန်ပျူတာကို သွက်လက်မြန်ဆန်လာစေဖို့ASC latest ve...
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ သုံးသူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမယ် မြန်န...
ဖုန်းရော ကွန်ပျုတာမှာပါ သုံးလို့ ရတဲ့ စကားပြောဆော့...
အင်တာနက်သုံးကြတဲ့ PC သမားတိုင်းအတွက်မရှိမဖြစ် Inte...
Play Store က Free ပေးတဲ့ Game တွေ , App တွေကို IDM...
မှဲ့အကြောင်းသိကောင်းစရာ ( မြန်မာလို )
Android Devices တွေမှာ Myanmar font သွင်းနည်း...
NOTE3LTE (N9005) Root ရပြီးမြန်မာစာမရဘူးဆိုတဲ့သူ...
Huawei Y320C မှာ 1x လိုင်းမတက်တဲ့ပြဿနာကိုလွယ်ကူစွာ...
UPDATED -- မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သူဖြစ်စေ ၊ ပြည်ပေ...
PC မှာ viber ကိုမြန်မာစာအမှန်တကယ်မြင်နိုင်ပါပြီ
;လျှက်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့လာ တွက်ချက်လို့ သူငယ်ချင...
application greenify root
HTC ဖန်းတွေမှာ ဆောဝဲ data တွေကို ကူးပြောင်းပေးတဲ့...
super backup ဆော့ဝဲလေး
Android bosster.apk ဆော့ဝဲအလန်းလေး
Root လုပ်စာမလိုဘဲ မြန်မာ font သုံးလို၇တဲ huawei JB...
360akey root 4.3.0.0
Android ဖုန်းအမျိုးအစားပေါင်း 10000 ကျော်ကို Root ...
Kingno One Clink Root tool
ANDROID ဖုန်းကို ROOT လုပ်နည်းဖုန်းအမျိုးအစားပေါင်...
Adobe InDesign CS6 (မြန်မာလို တစ်ဆင့်ချင်းစီ ရှင်း...
Windows မျိုးစုံ တင်နည်းစာအုပ်များ (Windows Vista,...
Gmail အစွမ်းထက် နည်းလမ်း(၈၀) Ebook ( မြန်မာလို )
Windows DVD Maker အသုံးပြုနည်း စာအုပ်
Web Design လက်တွေ့ သင်ခန်းစာများ (မြန်မာလို စာအုပ်...
Fruity Loop 10 ဖြင့်သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖန်တီးနည်း မြန်...
PC မှာအင်တာနက်လိုင်းကောင်းမွန်ရန် လုပ်နည်း
G510 firmware (T8951, Android 4.0, V100R001CHNC01B...
Y300C firmware (Y300C, Android 4.1, Emotion UI, V1...
Room Master 3.3.1 For Android
PDF ဖိုင် E-Book တွေကို လျင်မြန်စွာ ဖတ်ရှုနိုင်စေဖိ...
USB Debugging on ထားစရာမလိုဘဲ ဖုန်းမှ Pattern Lock...
Huawei G700-U00 အား Rooting ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်မြန်မ...
Android အတွက် သင်ခန်းစာ(၃) written By Aung Min Han...
Huawei ဖုန်းတွေ software ရေးချိန်မှာ fail ဖြစ်ဖြစ်...
HUAWEI Y310-5000 Root & Touch Error ရှင်းနည်း
HUAWEI G520-T10 ကို root အလွယ်နည်းနဲ့ဖောက်မယ်ဗျာ လ...
HUAWEI Y300C,U8813D,G520,T8818 တွေကိုကလစ်တစ်ချက်န...
Android Device တွေပေါ်မှာ နောက်ခံ သီချင်းလေးတွေနဲ့ ...
Android Video Edit ﻿ဆော့ဝဲ﻿လေး
Talking Caller ID voices
Video Caller Id (Free) 1.11.05
ဖုန်းတစ်လုံး အသစ်ဝယ်ပြီး ဘယ်လို အားသွင်းကြမလဲ
ညောင်ရွက်ကိုသုံးပြီး ဖုန်း Battery က်ိုအားဖြည့်နည်...